Ziyini izimpahla? Imiqondo esemqoka | Ezezimali Zomnotho
Izimpahla zihambelana nazo zonke lezo izimpahla ezingokwenyama noma ezingakwazi ukuthengwa noma ukuthengiswa, okusho ukuthi, ukuthengiswa. Kwesinye isikhathi ukubhekisa kuzimpahla igama lezimpahla lingasetshenziswa, zombili zisebenza ngokuphelele futhi ziyafana. Izimpahla zibhekwa njengezimpahla zezomnotho ngenhloso yokuthi zingathengiswa. Imvamisa ziyingxenye eyingxenye noma ephelele yomsebenzi wezomnotho lapho ithuthukiswa futhi ishintshaniswa khona. Kungalesi sici lapho abathengi nabathengisi bokuthengiswayo besekela ubudlelwano babo bezohwebo nokushintshana ngokuya ngohlobo nentshisekelo abanayo. Le nzalo ingavela kuzimpawu zokuthengiswayo uqobo noma izinhloso ezilandelwa izinkampani.
Amandla okuba yinto enhle engathengiswa enza okuthengiswayo kuthathwe njengezimpahla ezinikeza amandla ukuhweba nokwenza umnotho usebenze. Kubandakanya zonke izimpahla ezibonakalayo ezifana nezinto zokusetshenziswa (ithusi, i-oats, i-ayoni ...) noma izimpahla ezingezona ezomzimba (amalungelo obunikazi, amalayisense, kanye namasheya enkampani). Inani lokuthengiswayo lingashintshashintsha ngokuhamba kwesikhathi futhi njengoba kungabonakala kumanani abo. Izici ezingabathonya zivame ukulungiswa isimo semakethe ngaleso sikhathi. Ukwazi ukuthi yiziphi izinto ezithinta amanani abo, uma zingathinta phezulu noma phansi noma ngokuya ngokubaluleka kwenkampani, qhubeka ufunda. I-athikili yanamuhla kuhloswe ngayo ukubhekisisa izimpahla futhi uziqonde ngokuphelele kusukela kumibono ehlukene kanye nezintshisekelo ezithintekayo kuzo.
1 Izici ezithinta intengo yezimpahla
2 Izimpahla kuye ngombono webhizinisi
2.1 Kuya ngesikhundla sebhizinisi
Izici ezithinta intengo yezimpahla
Intengo yezimpahla ingahlala iphezulu noma ishibhile, kepha ezimweni eziningi amanani ayo azokwehla ngokuhamba kwesikhathi. Konke lokhu kuzoncika ezintweni ezahlukahlukene ezingenelela kuzo. Okuphawuleka kakhulu kungaba okulandelayo:
Ngobuningi bayo. Lezo zimpahla ezinokuncane kakhulu zivame ukubiza kakhulu njengoba zimbalwa futhi ziyigugu kakhulu. Uma futhi kungukuthengiswa okubalulekile ekwakhiweni kwemikhiqizo ethile futhi bengenazo izinto ezingangena esikhundleni sayo, kubangela ukuthi intengo ikhuphuke nakakhulu. Ngokuphambene nalokho, ukukhiqizwa okuncane noma inzalo ekumakethweni izokwenza ukuthi intengo yayo yehle njengoba kunesidingo esincane. Izobala nokutholakala okuphelele kwezimpahla. Isibonelo, i-palladium (esetshenziswa ngokwesibonelo kuma-catalytic converters) ayivamile kakhulu futhi intengo yayo iphezulu, kanti amanzi maningi kakhulu futhi nentengo yawo iphansi.
Uma benokubambela. Ngokuhambisana nalokhu okungenhla. Uma izimpahla zibalulekile ekwakhiweni, ekwandisweni noma ekuthengisweni ngenxa yezici zazo, imvamisa zinenani eliphakeme. Ikakhulukazi uma ezinye izimpahla zingenakusetshenziswa ngenxa yezici zazo, lokho kuphela kubenza babaluleke. Isibonelo igolide. Uma, ngaphezu kwalokho, kuvela okuhle okusha okungathengiswa, nakho okwenze ukufunwa okuningi, futhi kungenziwa kuphela ngegolide, lokho kungadala ukuthi intengo ikhuphuke kakhulu.
Okokukhetha. Lawa malungelo okukhishwa ngokuvamile ahlanganiswa namalungelo obunikazi noma izimpawu zokuhweba. Le mikhawulo yokuthengisa izimpahla noma izinsizakalo yenza lezo zimpahla futhi zikhuphuke noma zehle ngenani. Isibonelo, ilayisense lingasebenza iminyaka embalwa, njenge-patent, bese linikeza 'ukubanjwa kwamahhala'.
Ukuphathwa okusetshenzisiwe. Intengo yezimpahla ingahle ihambisane nokuthuthwa, ukugcinwa, indawo evela kuyo, njll. Yonke le ngqalasizinda nempahla yokuhweba nayo ingakhuphula intengo ngokuya ngendawo yokugcina yebhizinisi. Kunesikhathi lapho, ngokuya ngezimpawu nokubaluleka kokuthengiswayo okuthile, izinkampani zingakhetha ukuguqula amasu azo uma kungenzeka zidinge okuningi noma okuncane ngomsebenzi wazo wezomnotho. Lokhu kusiletha ephuzwini elilandelayo.
Izimpahla kuye ngombono webhizinisi
Ukuthi izimpahla zingathengwa ngentengo ephakeme noma ephansi kuzoya ngezici ezibalulwe ngenhla. Kodwa-ke, "igama lokugcina" lilele kakhulu endleleni yebhizinisi enganikezwa. Lokho kumaketha okuthengiswayo kunenzuzo enkulu noma cha kwenkampani, nakho kuzoya ngemikhawulo yenzuzo yakho. Uma ukutholwa kwezimpahla kuthonywe kakhulu yimvelaphi, inkampani (futhi kuya ngosayizi wayo) ingahamba uma ngale ndlela umkhiqizo wayo usebenza kahle futhi unenzuzo. Ngokuphambene nalokho, ukuthengiswa kwemikhiqizo yakho noma okuthengiswayo kungathinteka noma kuklonyeliswe, ngokuya ngokulula kokuhanjiswa kwayo. Ukunquma ngalezi zinguquko zamasu kuzoya ngombono nezinhloso zebhizinisi ngalinye.
Leli qhinga nombono webhizinisi kungakhuphula izinga lapho okuthengiswayo kubaluleke khona noma cha, ukuze kuqhubeke nesigaba, noma ngokuphambene nokuzivuselela, kuya ngenzuzo engayithola ekukhokhisweni kwayo kokugcina. Iphinde ibe nomthelela enanini elikhokhelwe yona futhi ngenxa yalokho ukufuna ezinye izindlela ezintsha. Esimweni esidlulele kakhulu, ngaphandle komkhawulo ozokwazi ukukhipha ngempahla eyodwa noma ngaphezulu ngamanani aphezulu, inkampani kuzofanele icace kakhulu ngokusebenza kwayo kanye nemodeli yezomnotho.
Kuya ngesikhundla sebhizinisi
Ekugcineni, akuwona wonke amabhizinisi anikela ngemikhiqizo yawo noma athengisa izimpahla zawo ngentengo efanayo. Umkhakha ungaba nezintengo ezilawulwayo (ngokwesibonelo ezikagwayi eSpain), kepha njengokujwayelekile inkampani imisa intengo uqobo. Lokhu kuzokwenza ukuthi kwesinye isikhathi ukutholakala noma ukusatshalaliswa kwempahla kungaba nenzuzo ethe xaxa noma encane. Uma inzuzo iphezulu ngamamaki wenzuzo ephezulu, ngokwesibonelo i-Apple uma iqhathaniswa nezinye izinkampani ze-smartphone, inendawo enkulu yokuqondisa.
Esinye isibonelo kungaba yileso senkampani ezinikele ekukhishweni kwegolide. Akubona bonke abatshala isabelomali esifanayo ukuthola amagolide egolide. Labo bavukuzi isabelomali sabo sokuthola inani elifanayo liphansi babekwazi ukubona intengo yegolide yehla futhi noma ngabe bebengenzi inzuzo encane bazoqhubeka nokuba. Ngokuphambene nalokho, labo okumele batshale imali enkulu ezimayini zegolide bazoba ngabokuqala ukulinyazwa uma bebona ukuthi intengo yento eluhlaza abafuna ukuyisabalalisa iyawa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Ziyini izimpahla? Imiqondo esemqoka